महाधिवेशन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको आ’ह्वान ! – Nepal Online Khabar
महाधिवेशन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको आ’ह्वान !
भाद्र १८, २०७८ शुक्रबार 177
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको महाधिवेशन सफल बनाउन आ’ह्वान गर्नुभएको छ ।
नेपालीकांग्रेस सूर्यविनायकनगरपालिका वडा नं. ५ को वडा अधिवेशन शुक्रवार सिर्जनानगरमा उ’द्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रको स्थायित्व र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसको महाधिवेशन सफल बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउन पनि महाधिवेशन सफल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर पार्टीमा एकताको सन्देश दिन आग्रह गर्दै देउवाले भन्नुभयो, ‘महाधिवेशन पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने र आगामी कार्यकालको लागि कार्यनीति र नेतृत्व चयन गर्ने थलो हो ।’
उहाँले पार्टीलाई संवैधानिक संकट आउन सक्ने भएकाले को’रोनाको जो’खिमका बीच महाधिवेशन गर्नुपरेको बताउनुभयो । ‘कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउन पनि को’रोनाको जो’खिमका बीचमहाधिवेशन गर्नु परेको हाे । महाधिवेशनलाई सफल बनाउन स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सहभागी हुन आ’ह्वान गर्दछु,’ उहाँले भनुभयो ।
Prevस’र्वोच्चले सभामुख र निर्वाचन आयोगवि’रुद्धको रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै !
Nextअध्यक्ष रुद्र नेपाल र इन्चार्ज रघुजी पन्तलाई नै वाइपास गरेर पीपीएलएको भेला !